MUNAASAB UU KHARTOUM KU QABTAY AASAASKA NAAGIGA IIMMAAMU SHAAFICI EE SUUDAAN
Stanza Khartoum Sudan
SomaliTalk | November 18, 2004
Waxaa markay taariikhdu ahayd 16-11-2004, daarta weyn ee shirarka ee beerta nasashada ee loo yaqaan Riyaadalcaalii, ka dhacday xaflad sii xeeldheer loo soo agaasimay loona soo agloolay.
Waxaa munaasabaddan oo aheyd mid dhammeystirneed soo qabanqaabiyay naadiga aasaaska Immaamu A'shaafici [Imamu A'shafi'i foundation club] ee dalka Suudaan iyo hormuudyadiisa.
Xafladdan ayaa aheyd mid lagu maamuusayay dhallinyaro naadiga ka tirsan oo ka qalinqabiyay jaamacadaha kala duwan ee dalweynaha Suudaan; kuwaasoo u kala qeybsanaa kuwa dhammeystay darajada koowaad ee shahaadada jaamacadda [Bachelor's Degree] iyo kuwa dhammeystay darajada labaad ee shahaadada jaamacadda [Master's Degree].
Waxaana ardeydaasi ka mid ahaa:
1- Cabdullaahi Cabbaas Xasan kuliyadda sharciyada [faculty of Sharia department of law] jaamacadda caalamiga ah ee Afrika.
2- Maxamed Xasan Cumar kuliyadda waxbarashada [faculty of education department of History] jaamacadda caalamiga ah ee Afrika.
3- Axmed Cabdullaahi Asad kuliyadda dhaqaalaha [faculty of Economics department of Administration] jaamacadda caalamiga ah ee Afrika.
4- Daahir Cali Muuse kuliyadda dhaqaalaha [faculty of Economics department of Administration] jaamacadda caalamiga ah ee Afrika. 5- Cabdullaahi Maxamed Shidane kuliyadda cilmiga koombiyuutarka [faculty Computer Science] jaamacadda Suudaan.
Intaasi waa ardeydii dhammeystay darajada koowaad ee cilmiga shahaadada jaamacadda; waxaasa kaloo wehliyay mudane Axmed Cabdullaahi Sheekh, madaxii hore ee FPENS, Formal Private Education Network of Somalia, oo isagu ahaa ardeygii dhammeystay darajada labaad ee shahaada jaamacadda kuliyadda maamulka waxbarashada sare ee jaamacadda caalamiga ah ee Afrika; kuna guuleystay darajada koowaad ee shahaada sharafka [first class honour M.A].
Munaasabaddan ayaa waxaa looga sahay dhigay laguna sagootinayay mudana Axmed Cabdullaahi Sheekh, oo isagu lagu wada inuu dhawaan u sii jeedlada ama u kicitima dalka Soomaaliya, waxeyna munaasabaddu u aheyd mid lagu sharfayay maadama uu ka mid yahay aabbayaashii daladda sare ku xusan dhidibada u aasay kana miradhaliyay safka horana uu kaga jira dadka lagu tixgaliya.
Xafladdan ayaa dhanka kale qeyb ka aheyd dabaaldagyada lagu maamuusaya sii sagootinta bisha barakeysan ee soonqaad iyo soo dhaweynta ciidda islamarkaana aheyd daahfurka naadiga ee sanadkan aynu ku jirna ee 2004, oo marka laga eega dhanka Soomaalida ah mid xambaarsan waji cusub iyo kalaguur siyaasadeed, oo ay gabi ahaan Soomaalida ku dhaqan dacalada dunida ugu dhagraaricinayaan dawlad qaran iyo kaladambeyn Soomaalinimo oo marka kale dalka ka hanaqaadda, islamrkaana lagu bidhaaminaya kaalinta dawladda dhawaan lagu soo unkay dalka dariska ah ee Kenya uuna majaraha u haya mudane col: Cabdullaahi Yuusuf Axamed.
Xafladdan ayaa daarta dusha sare ku xusan ka furantay abbaaraha 10:00-kii aroornimo ee saaka, waxaana barnaamijtii goobta ka baxayay oo ahaa kuwa kala jaad ah, balse xambaarsanaa xiisa iyo xeeldheeri aan la soo koobi karan; daadihinayay Cabdullaahi Cismaan, waxaa kaloo dhankiisa la qaadaadhigayay Bashiir Cabdi, iyagoo isula daadihinayay si dheellitiran oon dhalliil laheyn.
Waxaana furitaankii xafladda lagu soo dhaweeyay professor Cabdullaahi Ciisa, oo ah rugcaddaa aqoonyahan ah oo waaya'arag ah dawladihii dalka soo marayna lasoo caana cabbay, wuxuuna halkaasi kasoo jeediyay hadal mug iyo cuf leh oo taabanayay meela badan lagana dhadhansanayay waxsheeg iyo waano waayeel oy xigmadi ku dhantahay. Mutacalimkan waaya'aragga ah ayaa hadalkiisii ku billaabay sidatan: "Waxaan ahay xiddig sii dhacaya laakiin waxaan maanta idiinka tagayaa waano odaytinimo iyo inaan idinku boorriya inaad tihiin masuuliyiinti dalka ee barita".
Baroofka oo ka mid ahaa martisharafti munaasabadda lagu casuumay ayaa si kulul ardeydii goobta fadhiyay oo isugu jiray rag iyo dumar u dareensiiyay burburkii dalka aafeeyay ee ragaadiyay.
Waxaa kaloo hadal soo dhaweyn ah oo kooban goobta ka soo jeediyay Liibaan Cabdullaahi Cabdi, madaxa naadiga ee dalka Suudaan; waxaa kaloo hadal diiran oo diifoon dareenka dhageystayaashana si weyn ugu daadagay halkaasi ka soo jeediyay mudane Maxamed Xaaji wakiilka FPENS u fadhiya dalka Suudaan, islamarkaana ah macalin waxkadhiga jaamacadda caalamiga ah ee Afrika, kuna dheeraaday guubaabada iyo geesinimogalinta da'yarta Soomaaliyeed ee Suudaan.
Waxaa kaloo goobta ka hadlay aqoonyahanno magac iyo meeqaan weyn ku leh bulshada Soomaaliyeed ee dalka Suudaan, si hufanna looga tixgaliya dalkan ay ku noolyihiin.
Waloow aan la soo koobi kareynin khudbooyinkii mufakiriinta, ayaa marka munaasabadda qaabkii ay u dhacday kuna dhammaatay la rogrogo lana ruuga lagu tilmaami karaa mid gardhalad aheyd.
Waxaa in la xusa mudan maqaawiir ka koobnaa rag iyo dumar ka soo qeybgalay xafladda, waxaana ka mid ahaa masuuliyiin ka socday ururka ardeyda Soomaaliyeed ee dalka Suudaan iyo abwaan Soomaaliyeed oo goobtaasi ka soo geediyay gabayo iyo murti dadku ay aad ugu qosleen uguna riyaaqeen, gabayadaas oo kala ahaa kuwa kala jaad ah oo talo iyo tusaaleyn xambaarsanaa.
Waxaa kaloo goobta ku sugnaa masuuliyiin ka socday jamciyadda dhaqanka iyo suugaanta Soomaaliyeed iyo wargeyska Haldoor ee ka soo baxa magaaladatan Khartoum.
Gabagabadii iyo gunaadakii waxey munaasabaddu soo afjarantay 2:oo-dii duhurnimo waxaana lagu soo gunaanaday shahaadooyin tixgalin ah oo la guddoonsiiyay qaar ka mid ka soo qeygalayaashi xafladda oo looga gollahaa in lagu abaalmariya, kaddib markii ay howlahoodii si hagarla'aan ah u guteen isku soo duuboo manaasabadan ayaa u dhacday si habsami ah oo hufan oo hiiladeysan.
Waxaana ugu dambeyntii lagu soo xiray aayadaha Quraanka kariimka ah oo markii horaba lagu furay oo uu akhriyay Maxamed Xasan Cumar, waxaana ay howshii isugu biyashubatay guul iyo reynreyn.
By: Stanza Khartoum Sudan.
Faafin: SomaliTalk | Nov 18, 2004